Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247605 times)
« Reply #450 on: August 09, 2011, 10:12:13 AM »
" ကောင်း လိုက် တဲ့ ကြော် ငြာ "
သတင်းစာ လက်ပွေ့ ရောင်းသူ ချာတိတ်က မော်စကို ဘူတာကြီးတွင် အောက်ပါအတိုင်း
" ပရားပဒါး ( အမှန်တရား ) မရှိတော့ဘူး. .။ ဆိုဗီယက် ရုရှား ရောင်းလို့ကုန်ပြီ..။
လုပ်အား ပဲ ကျန်တော့တယ်... ။ ၅ ပြားနဲ့ရမယ်.. "
( အထက်ပါ သတင်းစာများကို ယခုအထိ ထုတ်ဝေနေဆဲ ဖြစ်သည် ။ )
" ခွင့် လွတ် ပါ "
ဆိုဗီယက် ယူနီယံသို့အလည်ရောက်နေသော ကားလ်မက်စ် က ရေဒီယိုမှ စကားပြောခွင့်
ပေးပါရန် ဆိုဗီယက် ခေါင်းဆောင် ဘရက်ဇညက် ကို ခွင့်တောင်းသည် ။ ဘရက်ဇညက် က
" ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို ခင်ဗျား စတင်ဖော်ထုတ်သူ ဖြစ်ပေမဲ့ ကျနော် တစ်ယောက်တည်းနဲ့ဒီလို
အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စကို ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး..၊ ကျနော်တို့ ဆီမှာ စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု
စနစ်ကို ကျင့်သုံးပါတယ်.. "
" ကျနော် စကား တစ်ခွန်းတည်း ပြောမှာပါဗျာ.. "
တစ်ခွန်းတည်းဆိုသဖြင့် အရဲစွန့် ကာ ဘရက်ဇညက် ခွင့်ပြုလိုက်သည် ။ ကားလ်မက်စ် သည်
မိုက်ကရိုဖုန်းရှေ့ရပ်ကာ အောက်ပါအတိုင်း ပြောလိုက်သည် ။
" ကမ္ဘာ့လုပ်သားထု ခင်ဗျာ.. ကျနော့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ.. "
« Reply #451 on: August 09, 2011, 10:26:05 AM »
" ချက် ဆို နား ခွက် က မီး တောက် ရ မယ်.. "
ဆိုဗီယက်ခေတ် ရုရှားတောမြို့လေး တစ်မြို့ ရှိ စုပေါင်းလယ်ယာလုပ်သားနှင့် မွေးမြူရေးခြံ
လုပ်သားတို့ အတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသော စုပေါင်းဈေးသို့နိုင်ငံခြား ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တစ်
ဖွဲ့လာရောက် လေ့လာသည် ။ ဈေးထောင့်တစ်နေရာတွင် ဦးကြီးတစ်ယောက် မိမိ၏ နွားမကို
ချ ရောင်းနေသည် ။ ဈေးနှုန်းကို ဧည့်သည်များ ၀ိုင်းမေးကြရာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နှင့်လိုက်
ပါလာသော မြို့ နယ်ပါတီယူနစ် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးက ဧည့်သည်တို့ ၏ နောက်ကျောဘက်
မှ နေ၍ လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့် " ဈေးကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် ပြောရန် " အရိပ်ပြသည်။
ဦးကြီးက ပြောသည် ။
" သုံး ရူဘယ် တည်းပါ "
ဧည့်သည်များ ကျေနပ်စွာ ခေါင်းညိတ်လိုက်ကြသည် ။ ဤ အချိန်တွင် အနားမှ ဖြတ်သွားသူ
တစ်ယောက်က " ဈေးနှုန်း " ကို ကြားလိုက်သဖြင့် နွားရောင်းသူ ရှေ့ သို့တိုးလာသည် ။
" နွားမတစ်ကောင်ကို သုံး ရူဘယ် ... ဟုတ်လား.. ၀ယ်တယ်ဗျာ... "
ပါတီ အတွင်းရေးမှူးသည် ဧည့်သည်များ မမြင်အောင် နွားဝယ်သူကို လက်သီး ဆုပ်ပြသည် ။
မျက်စိနှစ်လုံးကို ပြူးဖြဲပြသည် ။ ၀ယ်သူ ချက်ချင်း သဘောပေါက်သွားသည် ။
" အင်း ....မ၀ယ်တော့ပါဘူးလေ... နောက်ထပ် တစ် ရူဘယ် ထပ်ထဲ့လိုက်ပြီး ကြက်ပဲ ၀ယ်လိုက်
« Reply #452 on: August 09, 2011, 10:34:52 AM »
" ငုန် တာ ဥ စား ချင် တယ် "
ဆိုင်ထဲသို့ကိုချူချာ ၀င်လာပြီး ဈေးရောင်သူကို မေးသည် ။
" ခင်ဗျားတို့ ဆီမှာ ငုန်တာဥ ရှိသလား ဟင် "
" တစ်အချက်..- ငုန်တာဥ မဟုတ်ဘူး....မုန်လာဥ ။ နှစ်အချက်...- မရှိဘူး..။
သုံးအချက်...- နောက်တစ်ခါ ငုန်တာဥလို့လာပြောရင် မင်းကို ဟော့ဟိုနံရံ
မှာ သံ နဲ့ရိုက်ထားလိုက်မယ်....နားလည်လား... "
ရက်အနည်းငယ်ကြာသောအခါ စောစောက ဆိုင်သို့ကိုချူချာ ပြန်ရောက်လာသည် ။
" ခင်ဗျားတို့ ဆိုင်မှာ သံ ရှိလား ဟင်.. "
" မရှိဘူး.. "
" ဒါဆို ငုန်တာဥ ကောဟင် "
« Reply #453 on: August 09, 2011, 10:42:19 AM »
" ကိုယ် စောင့် နတ် "
လူတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာသည် ။ ရုတ်တရက် စိုးရိမ်တစ်ကြီး ပြောသော
အသံ သေးသေးလေး တစ်ခုကို ကြားသည် ။
" နောက်ကို မြန်မြန်ဆုတ် "
ထိုသူ နောက်ကို ဆုတ်လိုက်သည် ။ ဤအချိန်တွင် တိုက်ဝရံတာမှ ပန်းအိုးတစ်လုံး
ကျလာသည် ။ မိမိ၏ အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင်ကို တွေ့ လိုတွေ့ ငြား ဘေးဘီကို
ထိုလူ ကြည့်သည် ။
" ငါ့ အသက်ကို ကယ်လိုက်တာ ဘယ်သူလဲ.. "
" ငါ ပဲ..၊ ငါ ဟာ မင်းရဲ့ကိုယ်စောင့်နတ် ၊ ငါ မင်းရဲ့အိတ်ထောင်ထဲမှာ ရှိနေတယ် "
ထိုလူ အိတ်ထောင်ကို နှိုက်သည် ။ အထဲမှ လက်မ သာသာ အရွယ်ရှိ မှင်စာလေးကို
တွေ့ ရသည် ။ မှင်စာကို လက်နှင့်ဖိခြေလိုက်ပြီး မကျေမနပ် ပြောသည် ။
" ငါ မိန်းမ ယူတုန်းက မင်း ဘယ်သွားနေသလဲကွ ဟေ... "
« Reply #454 on: August 09, 2011, 11:10:16 AM »
" မ လိမ် နဲ့"
လင်မယား စကားများ ရန်ဖြစ်နေကြသည် ။
" ငါ့ကို ပြောစမ်း..၊ မင်း ငါ့ကို ဘာဖြစ်လို့ယူခဲ့တာလဲ.....ဒီလိုပဲ
နေ့ စဉ်နဲ့ အမျှ ငါ့ကို ရန်လုပ်ဖို့ယူထားတာလားကွ ဟေ.. "
" ရှင် အသုံးမကျတဲ့ ယောင်္ကျားမှန်း မသိလို့ယူခဲ့မိတာပေါ့ တော်.. "
" မင်း မလိမ်နဲ့ ...ဒီအကြောင်းကို မင်း အစကတည်းက သိပြီးသား.. "
" နောက် ဆုံး စ ကား "
မနေ့ က မိန်းမနှင့် ရန်ဖြစ်ခဲ့သည့် အကြောင်းကို မိတ်ဆွေများအား ကိုရင်မောင်
ပြောပြနေသည် ။ မိတ်ဆွေများက ၄င်း ပြောပြနေသည်ကို နားထောင်ပြီးနောက်
၄င်းကို မေးသည် ။
" ရန်ပွဲကို ဘယ်သူ အဆုံးသတ်လိုက်သလဲ.. "
" ကျနော် ပေ့ါ.. "
" ခင်ဗျား ဘယ်လို ပြောလိုက်လို့ရန်ပွဲပြီးသွား ရတာလဲ.... "
" ကောင်းပြီ....၀ယ်ကွာ လို့ပြောလိုက်တယ်... "
« Last Edit: August 09, 2011, 03:50:47 PM by tunaye2011 »
« Reply #455 on: August 09, 2011, 02:25:57 PM »
" သိ ချင် တာ ပေါ့ "
လင်မယား နှစ်ယောက် ရွှေတိဂုံ ဘုရားဖူးပြီး ဘုရားကုန်းတော်ပေါ်မှ ဆင်းလာကြသည် ။
လမ်းတွင် မိန်းမက ပြောသည် ။
" ရှင် အလှူခံပုံးမှာ ငွေငါးထောင် လှူလိုက်တာ ကျမ မြင်တယ်.. "
" အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ကွ.. "
" ဘာဖြစ်ရမှာလဲ....ဘာအပြစ်တွေ ဒီလောက်တောင် ကျူးလွန်ခဲ့လို့ဒီလောက်များများ
လှူလိုက်ရသလဲဆိုတာ ကျမ သိချင်တာပေါ့.. "
" သ ဘော မ တူ ဘူး "
ပါတီ ကလာပ်စည်း အတွင်းရေးမှူးက ပြောသည် ။
" ရဲဘော်..ရာဗင်နိုဗစ်ခ်ျ... အခု ဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရဲဘော်ရဲ့အမြင်ဘယ်
လိုရှိသလဲ ပြောစမ်းပါ.. "
" ကျနော့်ဆီမှာ အမြင်ရှိပါတယ်..၊ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအမြင်ကို ကျနော် သဘောမတူဘူးခင်ဗျ "
« Reply #456 on: August 09, 2011, 02:34:21 PM »
" ဘယ် သူ ထင် လို့လဲ "
မော်စကိုမြို့ လယ် လမ်းမပေါ် လျှောက်လာရင်း ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျ သည် မိမိ မကျေနပ်သည်ကို
အသံထွက် ရေရွတ်လာသည် ။
" တောက်.....နေရာတစ်ကာမှာ ဒီ သူခိုး ဓားပြတွေ ၊ လူလိမ်လူညစ်တွေ..၊ ငို့ ဘ ( ငါ့ဘို့)
သမားတွေပဲ ကြီးပွားခြယ်လှယ်နေကြပါလား....ထွီ "
၄င်းအနားသို့အရပ်ဝတ် လူနှစ်ယောက် ( ကေဂျီဘီ အရာရှိ ) ကပ်လာပြီး မေးသည် ။
" ခင်ဗျား..ဘယ်သူ့ ကို ရည်ညွှန်းပြီး ပြောတာလဲ.. "
" ဘယ်သူ့ ကို ရမလဲ...၊ အမေရိကန် နယ်ချဲ့ တွေကိုပေါ့.. "
အံ့သြသံဖြင့် ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျ ၄င်းတို့ နောက် ပြေးလိုက်ကာ ရိုးရိုးသားသား သိချင်သည့် ပုံစံ
ဖြင့် မေးသည် ။
" ခင်ဗျားတို့ ကကော ဘယ်သူလို့ထင်လို့ လဲဗျ..ဟင် "
« Reply #457 on: August 09, 2011, 02:46:52 PM »
" တစ် ခု တည်း သော ဆ န္ဒ "
မော်စကို ရင်ပြင်နီသို့ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်သည် ရင်ပြင်နီရှေ့ ရှိ
စတိုးဆိုင်ကြီးအနားတွင် လူအများ တန်းစီနေသည်ကို တွေ့ သည်နှင့် ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျ
အားမေးရာ " နိုင်ငံတော် ၏ အတိုးမဲ့ ထုတ်ချေးငွေကို ရယူလိုသူတွေ စာရင်းသွင်းနေ
တာပါ " ဟု ပြန်ပြောပြသည် ။
ဤအကြောင်းကို ကြားသောအခါ ဆိုဗီယက် ၀န်ကြီးချုပ် ကိုစီဂင် က ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျအား
မိမိ၏ရုံးခန်းသို့ဖိတ်ခေါ်ကာ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောသည် ။
" ရဲဘော် ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျ ၊ အစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေ ကိုယ်စား ခင်ဗျားကို ကျနော် ကျေးဇူး
တင်ပါတယ်. .။ နိုင်ငံခြားသားတွေ ရှေ့ မှာ အခုလို လိမ်လိမ်မာမာ ဖြေတတ်တဲ့ အတွက်
" ကျနော်ဟာ မျိုးချစ်သူ ပါ "
" ခင်ဗျား..ဘာလိုချင်သလဲ ပြော ..၊ ခင်ဗျားရဲ့ ဆန္ဒမှန်သမျှကို ကျနော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေး
ဘို့အဆင်သင့်ပဲ.. "
" အစ္စရေးကို သွားဘို့ဗီဇာ ထုတ်ပေးပါ "
« Reply #458 on: August 09, 2011, 02:58:26 PM »
" စ န္ဒ ရား ဆ ရာ သွား ရှာ ပြီ "
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၊ တက္ကဆပ် ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်သည် ။ အရက်ဘားအတွင်းသို့ 
ကောင်းဘွိုင်တစ်ယောက် ၀င်လာပြီး ၀ီစကီ ၀မ်းပက်မှာသည် ။ အရက်သောက်ရင်း ဘေး
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ရာ ဒေါင့်တစ်နေရာတွင် စန္ဒရားတစ်လုံးကို တွေ့ ရသည် ။ စန္ဒရား
ပေါ်တွင် စာတမ်းတစ်ခု ချိတ်ထားသည် ။ " စန္ဒရားဆရာကို သေနတ်ဖြင့် မပစ်ပါနှင့် သူ
တတ်သလောက် တီးခြင်း ဖြစ်ပါသည် " ဟူ၍ ဖြစ်သည် ။ စန္ဒရားထိုင်ခုံတွင် စန္ဒရားဆရာ
ကို မတွေ့ သဖြင့် ဘားပိုင်ရှင်ကို မေးသည် ။
" စန္ဒရား ဆရာ ဘယ်မှလဲဗျ.. "
ဘားပိုင်ရှင် သက်ပြင်းချပြီး ဖြေသည် ။
" စန္ဒရား ဆရာ သွားရှာပြီလေ....မနေ့ က စာမဖတ်တတ်တဲ့ ကောင်းဘွုိင်တစ်ယောက် ရောက်
« Reply #459 on: August 10, 2011, 01:32:35 PM »
" ကျေး ဇူး တင် စ ကား "
ဘတ်စ်ကားသည် ခရီးသည်များဖြင့် ပြည့်ကျပ်နေသည် ။ လူကြီးတစ်ဦးသည် ပြတင်းပေါက်ဘေးတွင်
ဇိမ်ကျကျ ထိုင်နေသော ၁၂ နှစ်သား အရွယ် ချာတိတ်ကို ပြောသည် ။
" မင်း နေရာက ဖယ်ပေးမယ်ဆိုရင် အန်ကယ်လ် ၂ ဒေါ်လာ ပေးမယ်.. "
ချာတိတ် နေရာက ထလိုက်သည် ။ လူကြီးက ၄င်းကို ၂ ဒေါ်လာ ပေးသည် ။ ထို့ နောက် အနားတွင်
ရပ်နေသော အမျိုးသမီးကို လူကြီးက ပြောသည် ။
" ထိုင်ပါ ခင်ဗျာ.. "
အမျိုးသမီးသည် အနည်းငယ် အံ့အားသင့်သွားသည် ။ ထို့ နောက် လွတ်သွားသော နေရာတွင် ၀င်ထိုင်
လိုက်ပြီး ချာတိတ်ကို ပြောသည် ။
" သား.... ၂ ဒေါ်လာပေးတဲ့ ဟိုအန်ကယ်လ်ကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောလိုက်ဦးလေ.. "